Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.2.3 Encore
မတ်လ 2014 ခုနှစ်တွင်ဆမ်ဘားနက်နဲ့နစ်ခ် Feamster Encore, Real-time နှင့်အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်းတာပေးမယ့်စနစ်ကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဂျော်ဂျီယာ Tech မှမှာသူသုတေသီများ, ၎င်းတို့၏ web စာမျက်နှာများတွင်၏အရင်းအမြစ်ဖိုင်တွေသို့ဤအသေးစားကုဒ်အတိုအထွာတပ်ဆင်ရန်က်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များမှအားပေးအားမြှောက်:
သင်က၌ဤကုဒ်အတိုအထွာနှင့်အတူဝဘ်စာမျက်နှာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သင့် web browser ကိုသုတေသီဖြစ်နိုင်သောဆင်ဆာ (ကပိတ်ပင်ထားသောနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ဥပမာဝက်ဘ်ဆိုက်) အတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်း website တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကအလားအလာပိတ်ဆို့က်ဘ်ဆိုက် (ပုံ 6.2) ကိုဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သုတေသီပြန်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဝဘ်စာမျက်နှာ၏ HTML ကိုအရင်းအမြစ်ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးမဟုတ်လျှင်ထို့ပြင်ဤအရာအားလုံးကိုမမြင်ရတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောမမြင်ရတဲ့ Third-party စာမျက်နှာတောင်းဆိုမှုများကို web ပေါ်မှာအမှန်တကယ်အတော်လေးဘုံများမှာ (Narayanan and Zevenbergen 2015) , ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိသလောက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြိုးစားမှုပါဝငျသညျ။
ပုံ 6.2: Encore ၏သုတေသနဒီဇိုင်းသိထား (Burnett and Feamster 2015) ။ ဇာစ်မြစ်ကိုက်ဘ်ဆိုက်အထဲတွင် embedded သေးငယ်တဲ့ကုဒ်အတိုအထွာ (ခြေလှမ်း 1) ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် (ခြေလှမ်း 2) ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောဝဘ်စာမျက်နှာ, ပြန်ဆို။ တစ်ဦးပိတ်ပင်ထားသည့်နိုင်ငံရေးအုပ်စုသည် (ခြေလှမ်း 3) ၏ website ကိုဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်းတာခြင်းပစ်မှတ်, ဝင်ရောက်ဖို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကြိုးစားမှု။ ထိုကဲ့သို့သောအစိုးရအဖြစ်တစ်ဦးကဆင်ဆာ, ထို့နောက်တိုင်းတာခြင်းပစ်မှတ် (ခြေလှမ်း 4) ရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်ကွန်ပျူတာကိုသုတေသီ (ထိုကိန်းဂဏန်းမှာပြမပါ) မှဤတောင်းဆိုမှုကို၏ရလဒ်များကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Burnett and Feamster (2015) , ပုံ 1 ။
ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဤချဉ်းကပ်မှုအချို့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လုံလောက်သောအရေအတွက်ကဒီရိုးရှင်းတဲ့ကုဒ်အတိုအထွာပါဝင်သည်လျှင်, Encore ဝက်ဘ်ဆိုက်များဆင်ဆာထားတဲ့တစ်ဦးကို real-time, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ-စကေးတိုင်းတာပေးနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းစတင်ခင်မှာ, သုတေသီကအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်း (United States မှာအများဆုံးဗဟိုရန်ပုံငွေသုတေသနအုပ်ချုပ်ခွင့်စည်းမျဉ်းများအစုအောက်မှာ "လူ့ဘာသာရပ်များသုတေသန" မဟုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီမံကိန်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ငြင်းဆန်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ IRB အတူအပ်နှင်း; နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့, ) ဒီအခနျး၏အဆုံးမှာသမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ။
Encore စတင်ခဲ့သည်မကြာခင်မှာပဲ, သို့သော်, ထို့နောက်တစ်ဦးဘွဲ့ရကျောင်းသား Ben က Zevenbergen, စီမံကိန်းများ၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့သုတေသီများမှဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ အထူးသဖြင့်, Zevenbergen အချို့သောနိုင်ငံများရှိလူဦးဟာသူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအချို့အထိခိုက်မခံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ဤလူလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီမပြုခဲ့ပါလျှင်အန္တာရာယ်နှင့်ထိတွေ့ခံရနိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ ဤစကားဝိုင်းများအပေါ်အခြေခံပြီး, ထို Encore အဖွဲ့သည်ဤဆိုဒ်များဝင်ရောက်ဖို့ Third-party ကြိုးစားမှုသာမန် web browsing ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဘုံကြောင့်သာ Facebook, Twitter နှင့် YouTube ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကြိုးစားရန်စီမံကိန်းကိုပြုပြင်ထားသော (Narayanan and Zevenbergen 2015) ။
ဒီအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဒီဇိုင်းကိုသုံးပြီး data ကိုစုဆောင်းပြီးနောက်, နည်းစနစ်နှင့်အချို့သောရလဒ်များကိုဖော်ပြနေတဲ့စက္ကူ SIGCOMM တစ်ဂုဏ်သိက္ခာကွန်ပျူတာသိပ္ပံကွန်ဖရတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကော်မတီစက္ကူ၏နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများတန်ဖိုးထားပေမယ့်ပါဝင်သူထံမှသိရှိသဘောတူညီခကျြ၏မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထို program ကော်မတီကပေမယ့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖော်ပြတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကြေညာချက်နှင့်တကွ, စက္ကူထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် (Burnett and Feamster 2015) ။ ထိုသို့သောလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကြေညာချက် SIGCOMM မှာမတိုင်မီအသုံးပြုခဲ့ကြသည်တစ်ခါမျှ, ဤကိစ္စတွင်သူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ကျင့်ဝတ်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားနောက်ထပ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့ဦးဆောင်ထားပြီး (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) ။